Ukuthengisa Ku-Inthanethi: Ukuthola Izimbangela Zokuthenga Zakho Zethemba Lakho | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 8, 2017 NgeSonto, uJanuwari 8, 2017 UFrank Bria
Omunye wemibuzo evame kakhulu engiyizwayo yile: Wazi kanjani ukuthi imuphi umyalezo ongawusebenzisa ekhasini lokufika noma umkhankaso wokukhangisa? Umbuzo ofanele. Umlayezo ongafanele uzonqoba ukwakhiwa okuhle, isiteshi esifanele, kanye nokupha okuhle.
Impendulo, kunjalo, kuya ngokuthi ikusasa lakho likuphi kumjikelezo wokuthenga. Kukhona izinyathelo ezinkulu ezi-4 kunoma yisiphi isinqumo sokuthenga. Ungabona kanjani ukuthi ikusasa lakho likuphi? Udinga ukukhomba yabo ukuthenga okubangela.
Ukuze ungene kulokho okubangela ukuthenga, masisebenzise isibonelo sonke esingasiqonda: ukuthenga ezitolo ezinkulu.
Ukufunda ngokuthenga ama-Trigger eMall
Okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kwezitolo kusezitolo ezinkulu. Bahle kakhulu ngokuzikhandla ekukuguquleni usuke emphefumulweni olahlekile, olahlekile uye kwikhasimende. Ngakho-ke ake sibheke ukuthi basebenzisana kanjani nawe futhi sifunde izifundo ezimbalwa mayelana nokuhlonza izinto ezenza ukuthi kuthengwe.
Cabanga ukuthi ubona isitolo ongakaze ungene kuso, bese ulibala ngaphandle lapho usibheka. Mhlawumbe usezitolo ezinkulu ubheka uphawu oluzama ukuthola ukuthi bangobani futhi benzani. Ngaphambi kokuthi wenze ukhetho lokuzibandakanya nalelo bhizinisi elithile, empeleni ukuzulazula.
Yigama eliqinile, kepha kuhle ukuchaza leyo ngxenye yokuqala yanoma yikuphi ukuxhumana. Leli gama lisebenza kubantu abafika nje kuwebhusayithi yakho bese bephinda bavele futhi; igama elithi 'izinga eliphezulu lokushaya' lisetshenziselwa ukuchaza lesi senzakalo. Lezi izi Abaphangi, ngisho namathemba akulesi sikhathi. Bangabantu abeza nje ukuzothanda, ngakho-ke siqala ukukhulisa amakhasimende ngaleso sigaba.
Indlela Yokuxhumana Nomuntu Ohamba Phansi: “Funda kabanzi”
Okokuqala ukubizelwa esenzweni kunoma yiliphi isu lokumaketha ngisho nakwithemba elingafanelekile kakhulu Funda kabanzi. Lesi simemo esiyisisekelo senzelwe ukuthi sibe yizinga eliphansi lokuzibophezela ongalicela ekulindeni - mane uchithe isikhathi esithile ukuthola okuningi.
The Funda kabanzi ukubizela esenzweni kungenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu ku-inthanethi ukuthola amathuba wokunikeza imininingwane. Konke ukumaketha kokuqukethwe ngokuyisisekelo i-a Funda kabanzi isu. Noma yikuphi ukunikezwa kwamahhala okufundisa ithemba lakho okuthile abebengakwazi ngaphambili yi- Funda kabanzi ukubizela esenzweni.
Lezi Funda kabanzi ukubizelwa esenzweni kungaphrintwa maqondana nento oyifundisayo. Ngokwesibonelo, Iwebhusayithi yeCrazyEgg uthi Ngibonise Imephu Yami Yokushisa empeleni efundisa ithemba labo okuthile okusha abebengakwazi ngaphambili.
Inhlamvu yokuthenga oyifunayo othile ophendula eyakho Funda kabanzi ukubizela esenzweni. Baphakamisa izandla futhi bakunikeza imvume yokuqhubeka nokuzimaketha kubo.
Hlala wazi ukuthi ithemba lakho liyaphendula ngoba bafuna ukufunda okuthile - ngakho ungafihli izinto zokuthengisa ngemuva kwe- a Funda kabanzi ukubizela esenzweni. Uma ucabanga ukuthi ikusasa lakho likulungele ukuthenga, bese ubanikeza Thenga Manje noma lungisa ukubizela esenzweni okuhambisana kakhulu nokulindelwe kwabo.
Isifundo: Udinga okuthile icacile futhi inesibindi ukuchaza lokho oyikho ku- a Loiterer.
Ake sicabange ukuthi okuthile ngesitolo kukuhehile. Leli yiphuzu ongena ngalo esitolo ngoba uzama nje ukuthola umuzwa wokuthi kwenzakalani noma bathengisani.
Uyazi ukuthi kwenzekani ngokulandelayo. Umthengisi uza kuwe akubuze ukuthi kukhona yini okufunayo. Impendulo yakho icishe izenzakalelayo,
Lokhu ngikubiza ngokuthi a Bheka.
Umuntu oqala nje ukuzibandakanya ebhizinisini lakho kepha engazi ngempela ukuthi unayo yini into yokuthenga ubheka nje.
Kepha bamane babheka ngoba abakakutholi okwamanje ukuthi yini abayifunayo noma abayidingayo. Kungumsebenzi wesitolo ukubeka yonke into ngendlela ongazitholela yona, ngoba kungenzeka ukuthi awuzukuxhumana nomthengisi ngalesi sikhathi.
A Bheka inesifiso sangempela emibonweni yokuqala. Izinto zithinta imizwa kakhulu futhi ziyabonakala kulesi sigaba. Kungakho isitolo sibeka umbhede waso ngaphandle ngombhede, okokulala ebusuku, nefenisha - ngakho-ke ungakucabanga ekhaya lakho.
Abagcini nje ngokubeka imibhede phezulu odongeni bakwenze udlule kuyo.
Nawe, kuzodingeka usize i- Bheka zibone ngeso lengqondo impilo yazo ngemuva kokusebenzisa umkhiqizo noma insiza yakho.
Umthengisi osebenza ekuseni kakhulu - futhi ngamandla - kulesi sikhathi ngeke abe ngamakhasimende akhulayo. Bazobe bebaxosha.
Kepha okubaluleke kakhulu, ngaphandle kokuthi bangazicabanga bephuma bephethe okuthile kuleso sitolo, bazohamba kungekudala. Isikhathi sabo sibalulekile futhi ngaphandle kokuthi okuthile kulesi sitolo kube nomthelela, bazovele baqhubeke.
Ungazibandakanya Kanjani Nombukeli: "Impilo Engcono"
Lokhu kubizelwa esenzweni yikhona okujwayeleke kakhulu kithi kwizikhangiso ze-TV. Ngoba akunakwenzeka ukuthi uvuke kusofa wakho uthenge okuthile ngokushesha, iningi lemikhiqizo emikhulu izama ukukwenza uzizwe ungcono ngokuthenga umkhiqizo wabo - lapho ekugcineni usondela kuwo.
Cabanga cishe yonke intengiso kabhiya oke wayibona. Uzoba nobungqingili, ube nabangane abaningi, ucebe…. uthola umqondo.
Impela, i- impilo engcono ixazulula inkinga, akuyona eyodwa oyibonile okwamanje.
Isu lokumaketha lapha ukumane ufake umkhiqizo njengokwakha impilo engcono - noma ngabe kusho ukuthini kumakhasimende akho aphelele. Ngakho-ke, lokhu kubizelwa esenzweni kugxile ku- wazizwa izidingo, into oyidingayo, kepha awukakhulumi ngomlomo noma awucabangi ngayo okwamanje. Isebenza ezingeni elingokomzwelo.
The Bheka uphendula kahle impilo engcono bizela esenzweni ngoba bafuna lokho okubonisayo - noma bengacabangi ukuthi bayakufuna ngaphambi kokuhlangana nawe. Kuyindlela ebucayi yokusiza ithemba lakho likhombe isidingo sabo - noma ngabe akukhulunywa.
Ungacabangi ukuthi lokhu kubizelwa esenzweni kusiza kuphela ekukhangiseni kwe-TV. Kubalulekile futhi ekumaketheni okuqondile.
Uma ngabe ithemba lakho lingazi ngokushesha noma likholwa ukuthi banesidingo osidingida, kuzofanela ukhombise ukuthi umkhiqizo noma insiza yakho izoyakha kanjani impilo engcono.
Ngokuya ngokuthi ungasheshe uqinisekise kanjani ithemba lakho lokuthi unganikela ngempilo engcono, ungahle ube ne- Thola Impilo Engenakho Ukucindezeleka or Yiba Nemali Eningi Yokusebenzisa ukubizela esenzweni. Lokhu kulingana ngqo komthengisi nokuthengisa ubhiya.
I-trigger yokuthenga lapha iphendula eyakho impilo engcono ukubizelwa esenzweni. Ngokuphendula kulokho, baphakamise izandla bakhombisa ukuthi bayakufuna ngempela lokhu okuhlinzekayo. Vele, abanalwazi lokuthi lusebenza kanjani noma lubiza malini; usadinga ukuthola ilungelo lokuvala ukuthengisa, kepha okwamanje, usesendleleni efanele.
Isifundo: Udinga ukupenda umbono ku- Bheka nencazelo yokuthi ungakwenza kanjani shintsha impilo yabo.
Ukuphequlula Esitolo Sezitolo
Manje ake ucabange ukuthi ubheka kulesi sitolo esisha sha futhi ngokungazelelwe into ethile ikubambe iso.
Uyabona ukuthi kuyinto ongayithanda noma oyidingayo. Lokhu kungaba iphuzu lapho ungathatha okuthile eshalofini, ukuhlole.
Kuleli qophelo uqhathanisa futhi uqhathanise. Ubheka inani, ubheka umaki futhi ubheka okukuwo.
Manje usungu- Shopper, uzibandakanye ngempela futhi ulungele ukuthatha isinqumo ngokuthi ngabe lokhu kuyinto oyidingayo.
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ngaphambi kwaleli phuzu, mhlawumbe ubungeke ube nentshisekelo engxoxweni nomthengisi. Futhi ngokuqinisekile ubungeke ube nentshisekelo kuzici zomkhiqizo.
Isitolo singaqala ukuzibandakanya ngempela Abathengi ngokwenza kube lula ukuqondanisa isidingo sakho nezinzuzo zemikhiqizo yabo. Kwenze kube lula ukufunda, kutholakale kalula.
Okungcono futhi, nikeza amathuluzi nezinsizakalo ezenziwe zaba ngezakho nezenziwe ngezifiso ezixhuma izidingo zethemba lakho nezinzuzo ozinikezayo. The more ngezifiso, ngcono.
Ukusebenzisana noShopper: “Lungisa”
Ngaphambi kokuthi ithemba lilungele ukuthenga, imvamisa bafuna nje ukulungisa izinkinga zabo - okungabakhuthaza ukuthi bathenge.
The lungisa ukubizela esenzweni kuhloselwe ukwenza inkinga yethemba lakho isuke.
Isihluthulelo esheshayo ine okuhle lungisa ukubizela esenzweni ekhasini labo lasekhaya.
Bakhomba inkinga: awunayo ithrafikhi eyanele.
Ufuna ukukulungisa? Bese ubhalise.
The lungisa ukubizela esenzweni kungaholela ekuthengisweni, kepha kaningi kuyandulela.
Uzobona amabhizinisi amaningi esebenzisa i- lungisa ukubizela esenzweni cishe ngokushesha. Kulungile uma inkinga ozama ukuyixazulula isobala kangangoba idinga ukwethulwa.
Kepha kubaninimabhizinisi abaningi, leyo nkinga ingahle ifihlwe. Izikhathi eziningi amathemba ethu abuzwa ubuhlungu, kepha angazi ukuthi buvelaphi lobu buhlungu. Uma uzithola kufanele uchaze lokho kumathemba akho, ungahle ugxumele kufayela le- lungisa bizela esenzweni ngokushesha okukhulu.
The Shopper uyazi ukuthi yini inkinga yakhe futhi ufuna ilungiswe. Noma yiluphi ulimi olumkhuthaza ukuthi alungise leyo nkinga luyafaneleka.
Ukubizelwa esenzweni okuqinile futhi kungasetshenziswa kaningi ukuthola ukuthi unethemba luni nokuthi ungabasiza kanjani kangcono.
Ngokuvamile, lungisa ukubizelwa esenzweni kuza ngamaqembu ngethemba lokukhetha elihambisana nesidingo sabo. Lapha, isu lokumaketha ukuhlunga amathemba ngamasegmenti esidingo ukuze ukwazi ukuwakhomba lapho kusiyiwa khona nesisombululo esifanele.
Isisusa sokuthenga lapha sisebenzisana ne- lungisa ukubizela esenzweni. Ngokuchofoza kuyo, ithemba lakho liphakamise isandla sakhombisa, yebo, banobuhlungu obuchazayo futhi bafuna indlela yokuthi buhambe. Manje, yisikhathi sokuxoxa ukuthi ukwenza kanjani lokho.
Isifundo: Udinga ukwethula ifayela le- izinzuzo yomkhiqizo noma isevisi yakho ngendlela ehambelana nesidingo sakho se- Shopper - amaqiniso nje kuleli phuzu, kepha kungekudala.
Ufuna usizo ngengxoxo yokuthengisa okufanele ilandele i- lungisa ukubizelwa esenzweni? Landa lesi Skripthi Sokuthengisa Amathikithi Esikhulu samahhala bese ugcwalisa izikhala ukuvala amadili amaningi wenkonzo yamathikithi aphezulu:
Landa iskripthi sokuthengisa samathikithi aphezulu
Iya ku-Cash Register
Uma leso sinqumo silungile, ithemba lakho lisuka ekubeni ngumthengi liye ekubeni ngu- Umthengi.
Umthengi ngumuntu olungele ukuthenga.
Yilapho abathengisi behlukanisa abaphumelele kulabo abahlulekile. Uzizwa kanjani esitolo lapho usukulungele ukuthenga kodwa ungakwazi ukuthola irejista yemali? Noma okubi kakhulu, uyakuthola, kepha akekho noyedwa ongakusiza?
Ngabe wake waphuma esitolo ngoba wehluleka ukuthenga lokho owawufuna ukukuthenga?
Abathengisi abenza kube sobala ukuthola irejista yemali benza kahle. Kuphakathi kokuthi isendaweni esobala noma uhambisana nomthengisi ozokuyisa lapho uqobo.
Noma yini enye ukuhluleka kwesipiliyoni. Awukwazi ukukhula kumakhasimende uma engakwazi ukuthenga kuwe.
Lokhu kungahle kubonakale uma unesayithi le-ecommerce. Kepha kwesinye isikhathi imikhiqizo yethu noma izinsizakalo zidinga izinyathelo ezimbalwa ukuvala isivumelwano.
Uma kunjalo, musa “ukufihla irejista yemali.” Qiniseka ukuthi ithemba lakho liyazi ukuthi ungaba kanjani ikhasimende.
Ukusebenzisana nomthengi: “Thenga Manje”
Ukubizelwa esenzweni okuqondile nokujwayelekile kakhulu yilokho okulindele ukuthi ithemba lokushaya isikhwama sabo semali: Thenga Manje!
Uyabona Thenga Manje baphrinte izindlela ezahlukahlukene ezindaweni ezahlukahlukene zomkhiqizo. Kukhathalogi ye-e-commerce, lokho kubizelwa esenzweni kungaqala ngokuthi "Ngeza ku-Cart." Kepha ngokuyisisekelo, sicela ithemba lokuthenga into abayengezayo enqoleni yabo.
Ezinye izikhathi, Thenga Manje ingafakwa ngokomkhiqizo ofuna ukuwuthenga. Okufana nokuba yilungu noma ukwakha uhlelo lwami. Lolu hlobo lwamagama lusebenza kakhulu futhi luqondene ngqo nesimo futhi lungaphakamisa impendulo ngokwenza isicelo sibe ngokwakho.
Ngezinye izikhathi Thenga Manje ayibandakanyi imali, kepha kunalokho idinga ukuthi kuqalwe ngomkhiqizo mahhala. Lokhu kwehluka kuvamile kumamodeli webhizinisi le- "freemium", imikhiqizo enesikhathi sokuzama samahhala, noma isiqinisekiso sokubuyiselwa imali.
Kuwo wonke lawa macala, Thenga Manje ukubizelwa esenzweni kuqondiswe ethembeni elilungele ukuzibophezela.
Ngokuya ngomkhiqizo noma insizakalo yakho, lokhu kungathatha isikhathi ukuthuthuka. Endabeni ye-e-commerce, imvamisa umsebenzisi angasuka Loiterer kuya Umthengi ngokushesha okukhulu, ngakho-ke Engeza ekalishini futhi Inqola Yokuthenga yenza umqondo.
Kepha kwesinye isikhathi, udinga ukwakha ukwethemba ngethemba lakho kanye ne Thenga Manje ukubizela esenzweni ekusebenzisaneni kokuqala kukhulu kakhulu, ngokushesha okukhulu.
Esikhundleni salokho, yakha isu lokumaketha elakha ukwethembana kuqala, bese ungena nge Thenga Manje ukubizelwa esenzweni ngemuva kokuthi ithemba selikhombisile ukuthi badlulile kuzo zonke izigaba zokuthenga.
I-trigger yokuthenga lapha iyona eyinhloko yazo zonke izimbangela zokuthenga; ngokuchofoza Thenga Manje inkinobho. Vele, njengoba wazi, umsebenzi wakho awenziwa. Udinga ukuba nenqubo yokuthengiselana ehlanzekile, emnandi, uphathe noma iziphi iziphikiso zokugcina, bese ugcwalisa ngendlela eyenza kube lula ukwenza ibhizinisi nawe.
Amabhizinisi amaningi alinyazwe “yimigqa emide ekhawuntareni yokuphuma” - ngisho noma ungenaso isitolo.
Isifundo: Udinga ukuchaza indlela yokwenza ibhizinisi nge-akhawunti yakho Umthengi; cacelwa ukuthi uwuthenga kanjani umkhiqizo wakho futhi uwenze kahle.
Ukuhlanganisa Zonke Izingcingo Ezenziwe Ngezenzo Ezi-4 Zokuthola Izimbangela Zokuthenga
Ukubizelwa esenzweni ngakunye kudinga ukusetshenziswa nezithameli ezifanele. Sakha ukwethembana nokwethembeka - kancane - ngokuxhumana ngakunye noma ngocezu lokuqukethwe. Udinga ukufanisa okuqukethwe nokubizelwa esenzweni.
Kubi nje ukuba nekholi yokubizela esenzweni kusenesikhathi kunqubo njengoba kuvumela ithemba lakho ukuthi libuyisele emuva isilayidi.
Ungakhuthazi umthengi wakho ukuthi athenge bese ulandela uhlelo lwe- Funda kabanzi ukubizela esenzweni.
Le nqubo yokusuka Loiterer ngokusebenzisa Bheka, Kuya Shopper, Kuya Umthengi yilokhu engikubiza ngokufuduka. Kuyikhono lethemba lokukhetha ukuzibandakanya nebhizinisi ezingeni elijulile nelijule baze bakhethe ukuba yikhasimende.
Ngandlela thile, awukhulisi amakhasimende - bayazithuthukisa. Konke ongakwenza ukubanikeza abakudingayo - ngqo lapho bekudinga khona - futhi bathole isignali yokufuduka - izimbangela zokuthenga - ngesikhathi esenzeka ngaso.
Njengoba ufunda ukusebenzisa ngayinye yezingcingo ezi-4 zokubizela esenzweni ngezithameli ezifanele, uzothola ukuthi uhola ithemba lakho ngenqubo yokuthengisa ngokushelela nangokuthembela okukhulu.
Tags: Engeza ekalishiniThenga Manjeukuziphatha komthengishayela esenzwenicrazyegge-commerceezokuhweba ngekhompyuthaukuzulazulaumbhekiababukeliukuthengisa onlineukuthengisa onlineihlumela elisheshayoi-shoppershopper kumthengi
UFrank Bria ungumpetha wezinsizakalo zamathikithi aphezulu. Uqale umsebenzi wakhe kwezamabhizinisi emkhakheni wezobuchwepheshe bezinsizakalo zezezimali. Usebenze ngeziqalo eziningana, abanye bathengisa ngamakhulu ezigidi zamaRandi, abanye bashaya amalangabi. Okuhlangenwe nakho kwakhe kufaka phakathi ukusiza ezinye zezinkampani ezinkulu kakhulu kumazwekazikazi ama-5 ukukhulisa amabhizinisi abo ngokwenza umthelela wangempela kumakhasimende abo - nokuguqula lokho kube ngumnikelo owesabekayo.
Manje uphendulela leso sipiliyoni emkhakheni wamabhizinisi amancane. Usebenza nabeluleki, abahlinzeki bezinsizakalo zebhizinisi, kanye nabanye ochwepheshe ukuze bahlukane nemali engenayo "esekwe kuphrojekthi" kanye nehora - ngokuyisisekelo isikhathi sokuhweba ngemali. Amakhasimende kaFrank akha amabhizinisi awo ngezinsizakalo ezikhiqizwayo lapho usebenzisa khona isikhathi sakho kumakhasimende amaningi - hhayi elilodwa nje.
Ungumbhali wencwadi edayiswa kakhulu emhlabeni wonke iSikali: Indlela Yokukhulisa Ibhizinisi Lakho Ngokusebenza Ngaphansi. Uhlala eGilbert, e-Arizona endaweni yasePhoenix nomkakhe namadodakazi abo amathathu.
Landa i-Ebook kaFrank: Ukwakha Ibhizinisi Lensizakalo: Izinganekwane ezi-3 Zokugcina Uphuke